Wolf KUB |
Net Entertainment keentaa in aad Wolf KUB. Tani waa xayawaan Kaapelitalo naadi online ciyaarta, iyadoo qayb ka ah maroojin ah in ay. Sida in aad sarcaadka by hadda, ciyaarta wuxuu ku saabsan yahay dhal ah pack in Yeeyi Cunto a. Iyadoo dhal this muuqan kara cute, waa inaad ka taxadartaa sida santuuq yaabaa qaniinyada weyn! dheeraad ah oo ku saabsan ciyaarta ka dib u eegis hoose Baro.
Iyadoo Wolves oo ku nool naadi ciyaarta online xiiso leh
Tani waa ciyaar naadi online ah in uu leeyahay 20 paylines go'an, 3 saf iyo 5 duntu. dhal Alfa of pack in Yeeyi Cunto u muuqataa on dhankiisii ​​bidix ee gacanta ku sida aad la ciyaareyso. Ee asalka ah waa baraf daboolay goobta kaynta ku yaal oo la dhigay habeenkii. Xashka ah Qaar ka mid ah ayaa sidoo kale lagu arki karo iyo sidoo kale si tartiib ah oo dhulka ku dhacaya
Kulankaan ayaa labadaba qiimaha hooseeyo iyo calaamadaha-qiimaha sare. The standard kaararka ciyaareed A, J, K, S, 9 iyo 10 sameeyaan Calaamooyinka low-qiimaha. Waayo, walxood sare qiimeeyo, aad leedahay calaamadaha xoolaha ay ka mid yihiin orso, bisad ￼wild, faras duur ah, guumays ah oo Wolf dhal ah.
Waxa kale oo aad leedahay icon firdhin wakiil Moon Full a a. A Print Snowy Wolf ka dhigan calaamad Wild. Astaanta duurjoogta ah ku bedeli doonaa dhammaan calaamadaha kale ee duntu ku, marka laga reebo icon kala firdhiso ah. By lagu badalaa Calaamooyinka kale, waxaa horumari doona fursadaha degtey guuleystay isku aad.
The Free dhigeeysa Feature Bonus Of Tani Online naadi Game
Wolf KUB leeyahay feature bonus Free dhigeeysa in la shaqeysiin marka aad dhulkii ugu yaraan saddex calaamadaha kala firdhiso Full Moon awoodi. Kuwa duntu in ay leeyihiin ugu yaraan saddex walxood oo kala firdhiso oo iyaga ku, ka dibna ayna miiqdaan doonaa. Tani waxay keeni doontaa in tiro ka mid ah dhigeeysa free la soo bandhigay. Haddii aad ku dari tirada dhigeeysa free qaawiyey ayaa kuu abaalgudi doona wadarta guud ee abaalmarinta dhigeeysa free.
Waxa kale oo aad dhaqaajiso karaa Feature Bilizar ah haddii ay jiraan xidhmooyinka calaamado isku mid ah oo ku saabsan ku ambadeen wax ka mid ah. On the duntu kale, laga yaabaa inaad aragto qaar ka mid ah calaamadaha kale ee la mid ah. Sida duntu ku miiqdaan calaamadaha, kuwaas oo sidoo kale icon ku duurjoogta ah, haddaba u eekaan doonaa in aad shaqaysato isku-dar ah ku guuleystay.
Waa kulan boosaska online si fiican loogu talagalay la naqshadeynta weyn iyo animation. soundtrack waa siman istaahila oo tayo sare leh iyo gameplay wanaagsan. Waxaad ka heli kartaa RTP ah 96.34%, taasoo la micno ah in haddii aad saamiga £ 100 inaad heli doonto heshay ka mid ah £ 96,34.